I Joseph Kasa-Vubu, izay antsoina fotsiny amin' ny hoe Kasa-Vubu, dia mpanao pôlitika kôngôley sady filoham-pirenena voalohany tao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô tamin’ ny taona 1960 hatramin' ny taona 1965. Teraka tamin' ny taona 1930 sy maty tamin’ ny taona 1965 izy.
1 Mpitaky fahaleovan-tena sy filohan' ny Repoblika voalohany
1.1 Mpitaky fahaleovantena
1.2 Filoham-pirenena voalohany
2 Niharan' ny fanonganam-panjakana
2.1 Naongana avy eo naverina teo amin' ny fitondrana
2.2 Naongan' i Mobutu fanindroany
Mpitaky fahaleovan-tena sy filohan' ny Repoblika voalohanyHanova
Mpampianatra i Kasa-Vubu . Voafidy ho filohan’ny Alliance des Bakongos na Association des Bakongos (hafohezina amin’ny heo Abako), izay fikambanana ara-pôlitika mpitaky fahaleovan-tena, izy tamin’ny taona 1954. (Ny Bakôngô dia foko iray ao Kongô). Izany Abako izany dia ikambanan’ ireo olona ao amin’ ny foko iray ao Kôngô zanatany belza. Azon’ ny Mouvement national congolais (MNC), antoko pôlitika naorin’ i Patrice Lumumba, anefa ny fandresena tamin’ ny fifidianana natao tamin’ ny volana Mey 1960, iray volana alohan’ ny hahazoana ny fahaleovan-tena, dia ny MNC izay nanohana ny haha fanjakana tokana tsy mizarazara an’ i Kôngô.
Tamin’ ny nahazoana ny fahaleovan-tena dia teraka ny fitakiana fizakan-tena isam-paritra isan-karazany ka nahatonga an’ i Lumumba nanaiky marimaritra iraisana. I Kasa-Vumbu no natao filoham-pirenena tao amin’ ny repoblika vaovao fa i Lumumba kosa no lasa piraiminisitra.
Niharan' ny fanonganam-panjakanaHanova
Naongana avy eo naverina teo amin' ny fitondranaHanova
Tamin’ ireo volana manaraka dia nikorontana izaitsizy i Kôngô. Nikomy tamin’ ny manamboninahitra fotsy hoditra ny miaramila tao amin’ny tafika kôngôley, ka tamin’ ny volana Jolay 1960 dia nitarika an’ i Katanga (faritra atsimo atsianana) tamin’ ny ady fampisarahana i Moïse Tshombé, izay nahatonga ny miaramilan’ i Belzika hiditra an-tsehatra. Tamin’ ny 14 Septambra 1960 dia nesorin’ i Mobutu Sese Seko, lehiben’ ny tafika kôngôley, i Kasavubu sy i Lumumba (izay novonoina tamin’ ny taona 1961). Naverina teo amin’ ny fitondrana anefa i Kasa-Vubu taorian’ izany.
Naongan' i Mobutu fanindroanyHanova
Tamin’ ny volana Janoary 1963 dia natsahatry ny tafiky ny Firenena Mikambana ny fihetsiketsehana fampisarahana nataon’ ireo ao Katanga, dia nahanton’ i Kasa-Vubu ny Antenimiera tamin’ ny volana Septambra. Nipoitra nanaraka izany ny ady ho amin’ ny fiovam-penitra mahery vaika (revôlisiona) tao Kwilu (tanàna ao atsimo andrefana). Nanangana governemanta hafa ny tao Stanleyville (Kisangani ankehitriny) ao amin' ny faritra atsinanan’i Kôngô, izay tsy rava raha tsy tamin’ny nandefasan’i Belzika sy i Britaina Lehibe ary i Etazonia miaramila mpilatsaka amin’ ny elonaina tao amin’ io faritra io. Tamin’ny 24 Novambra 1965 dia nisy ny fanonganam-panjakana nanala an’ i Kasa-Vubu ka Mobutu Sese Seko no nanambara tena ho filohan’ ny Repoblika.
Repoblika Demôkratikan'i Kôngô
Filoham-pirenen' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô: Joseph Kasa-Vubu - Mobutu Sese Seko - Laurent-Désiré Kabila - Joseph Kabila - Félix Tshisekedi
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Kasa-Vubu&oldid=1040520"
Dernière modification le 1 Desambra 2021, à 09:10
Voaova farany tamin'ny 1 Desambra 2021 amin'ny 09:10 ity pejy ity.